Mpanamboatra sy mpamatsy rano eraky ny kisoa China Marshine
Ity vokatra ity dia miorina amin'ny vatana, loharano, baolina vy. Rehefa misotro rano fisotro kisoa, mibontsina ny puston, miakatra ny baolina vy, hivoaka ny rano amin'ireo banga eo anelanelan'ny baolina sy ny loharano. Baolina sy fotony avy amin'ny hery misintona averina aorian'ny fisotroana rano, miaraka amin'izay koa ny tsindry rano mikatona mafy ny fivoahan'ny rano mihidy.
Mpisotro rano kisoa mandeha ho azy miaraka amin'ny vy tsy misy fangarony dia noforonina hisotroana kisoa madio sy fitehirizana rano. Ny fisotroana nonon'ny vy tsy misy fangarony dia manana taho, izay atosiky ny kisoa amin'ny manaikitra ny famoahana rano. Ary maharitra izy io ary tsy iharan'ny hakamoana. Rehefa esorin'ilay kisoa ny vavany, dia miverina amin'ny toerana mihidy ny tsorakazo amin'ny alàlan'ny herin'ny elastika an'ny diaphragm vita amin'ny silipo vita amin'ny silika.
1. Ny mpisotro rano kisoa mandeha ho azy miaraka amin'ny vy tsy misy fangarony dia afaka manome rano madio ho an'ny kisoa. Izy io dia fitaovana fisotroana ilaina amin'ny fiompiana kisoa.
2. Vy vy, anti-harafesina, famatsian-drano ho an'ny fahadiovana.
Material 304 Vy vy
Lanja afa-karatsaka 85g
Type Karazan-baolina hoodle
1. Kalitao avo lenta
Faharetana avo lenta. Vita amin'ny vy vy 304. Ny vatan'ny vatana matevina dia mitazona ny fisotroana fanoherana tonga lafatra ny harafesiny sy ny hady.
Tsy misy famoahana.
2. Andininy voafaritra tsara
Rafitra mirindra. Voaporofo fa voaporitra.
Ny rano mikoriana mitovy.
Ny efijery sivana miaraka amin'ny vy matevina dia afaka manivana ny ankamaroan'ny fahalotoana anaty rano ary manana androm-piainana maharitra.
Hivoaka ny rano mandeha ho azy rehefa mikasika ny switch ilay kisoa ary vonoina ho azy rehefa miala izy. Amin'ny paompin-drano dia tsy vitan'ny fitsitsiana rano fotsiny izy io fa fanesorana ny fandaniam-bola.
Fampiharana vokatra ：
Package entana ：
Previous: Mpinono manaikitra kinin-kisoa
Manaraka: Mpisotro rano be zana-gana